जसले देश चिनाउँछ
२०७४ मङ्सिर १६ शनिबार ०९:५९:००
- सौरभ कोइराला
नेपाल कला र संस्कृतिमा विश्वकै धनीमध्येको एक देश हो । नेपालमा बहुल जाति, भाषा, धर्मबीचको आपसी सद्भाव र एकता त उत्कृष्ट छँदै छ, त्यसका साथै फरक-फरक संस्कृति र धर्म मान्ने समुदायले निर्माण गरेका स्थानीय वास्तुकला पनि उत्कृष्ट छन् । प्राचीनकालदेखि विभिन्न समयमा प्रयोग गरिएका बसोबास पद्धति अपनाएर निर्माण गरिएका व्यक्तिगत घर तथा मन्दिर र दरबारहरु हेर्दा जो-कोहीको मन लोभिन्छ । यहाँका मठ, मन्दिर, दरबार तथा व्यक्तिगत घरहरु निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएका पद्धति र कलालाई गहन रूपमा नियालेर हेर्दा यसलाई विश्वकै अनुपम र अद्वितीय वास्तुकलाको नमुना भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली वास्तुकार (आर्किटेक्ट) तथा ग्रामीण विकासविज्ञ मिलन बगालेज्यूले नेपाली वास्तुकलाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर बसोबास पद्धति, निर्माण संस्कृति र सम्पदा संरक्षणका विषयहरुलाई समेटेर 'हिमाल खबरपत्रिका'मा ०६९ देखि ०७३ सालसम्म 'देशदृष्टि' स्तम्भमा लेख्नुभएका लेखहरुको सँगालोका रूपमा ‘देशदृष्टि’ नामक पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ । साङ्ग्रिला पुस्तकमार्फत प्रकाशित यो पुस्तकले देश बोलेको छ, देश देखेको छ । आफ्ना शक्तिशाली शब्दमार्फत मिलनज्यूले नेपाली वास्तुकलाका बारेमा बोल्नुभएको छ । नेपाली वास्तुकलाको निर्माण पद्धति र नेपालीहरुको बसोबास शैलीलाई नजिकबाट अध्ययन गरी त्यसको उत्कृष्ट विश्लेषण मिलनज्यूले 'देशदृष्टि'मार्फत गर्नुभएको छ ।
दुई खण्डमा विभाजित यो पुस्तकमा लेखकले दुईखाले चिन्तन गर्नुभएको छ । पहिलो- वास्तु चिन्तन र दोस्रो ग्रामीण समाज चिन्तन । नरम शैलीमा कडा विश्लेषण गरिएको यो पुस्तक नेपाली ग्रामीण निर्माण संस्कृति, बसोबास पद्धति र सम्पदा संरक्षणबारे अध्ययन गर्नेहरुका लागि अति उपयोगी छ ।
सिमेन्टले कोतर्दा-कोतर्दा कतारो जत्रो बनेको काठमाडौं र 'काठमाडौंबाहिर बाँचेको काठमान्डू' बारे लेखिएको लेख पढ्दा एकपटक सोच्न बाध्य भइन्छ । जथाभावी रूपमा स्थापित भएको अव्यवस्थित काठमाडौंको बसोबास शैलीबारे लेखक सन्तुष्ट हुनुहुन्न । पुस्तक टिप्पणीमा अमर न्यौपाने लेख्नुहुन्छ, “दूधमा बार्गेनिङ गर्ने तर रक्सीमा बार्गेनिङ नगर्ने शहरसँग लेखकको गुनासो छ । पुराना परम्परा र वास्तुसभ्यतालाई शहरले जोगाउन नसकेकोमा सरकारसँग पनि लेखकको गुनासो छ ।”
वास्तु र आर्किटेक्चरमा लेखकले सुन्दर टिप्पणी गर्नुभएको छ, “आस्था र संस्कारलाई फित्ताले नापेर, मेसिनले जाँचेर ठीक-बेठीक भन्न मिल्दैन, हुँदैन । वास्तु धार्मिक आस्थासमेत जोडिएको प्राचीन हिन्दू संस्कार र निर्माण सभ्यता हो । मलाई देउताको घरमा ‘वास्तु’ मिलेको राम्रो लाग्छ, मान्छेको घरमा ‘आर्किटेक्चर’ मिलेको । वास्तु अर्थात् आस्था मिसिएको निर्माण संस्कार, आर्किटेक्चर अर्थात् अहिलेको युगसुहाउँदो विज्ञान ।”
यसरी वास्तु र आर्किटेक्चरबीचको समानता/असमानता चित्रण गरेर लेखकले काठमाडौंको अव्यवस्थित शहरीकरण, हराउँदै गएका प्राचीन कला, शैली र सभ्यतामा निर्माण भएका सम्पदाका बारेमा गहकिलो विश्लेषण गर्नुभएको छ ।
नदी सभ्यता, बढ्दै गएको टावर निर्माण, बगैंचाहरुको संरक्षण, विभिन्न दरबार र उत्कृष्ट नेपाली भवन, स्थानीय संस्कृति तथा जात्रा, सम्पदा, वनजङ्गल आदि क्षेत्रका बारेमा मननीय विश्लेषण गरेर लेखकले सबै नेपालीलाई आफ्नोपन जोगाउनका लागि घच्घच्याउनु भएको छ । त्यसैगरी 'ग्रामीण समाज चिन्तन'मार्फत लेखकले नेपाली समाजको बसोबास शैली र त्यहाँ भइरहेको विकासलाई पनि चित्रण गर्नुभएको छ ।
“नारायणगोपाल जस्ता आधुनिक संगीतका ‘लिजेन्ड’लाई नारायणगोपाल चोकमा गाडीको २४ घण्टे कर्कशसहित रातोदिन धूलो खुवाउँदा उनको सम्मान भएको छ ? कतै शान्त र सुन्दर बगैंचामा उनले बनाएको मीठो धून बजिरहने गरी सुन्दर शालिक उभ्याइदिए पत्थर पनि रसाउँथ्यो होला ।”
'शालिकको सकस' नामक लेखमा बगालेले व्यक्त गर्नुभएको यो विचार सबैले एकपटक मनन गर्नु आवश्यक छ ।
०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र यसका परकम्पहरुले नेपाली वास्तुकला र नेपाली मनमा पारेका प्रभावबारे पनि लेखकले गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ । साथसाथै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण बारेका विचार पनि 'देशदृष्टि'मा समेटिएका छन् ।
म आफैँ पनि वास्तुकला पढ्ने विद्यार्थी हुँ । मैले धेरै समयदेखि नेपाली वास्तुकला, बसोबास पद्धति, निर्माण संस्कृति र सम्पदा संरक्षणबारे लेखिएका लेख र पुस्तकहरु खोजिरहेको थिएँ । यसैक्रममा मैले आदरणीय गुरु डा. किशन दत्त भट्टमार्फत 'देशदृष्टि' बारे थाहा पाएँ । यस किसिमको पुस्तकबारे थाहा पाउनु मेरा लागि ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटेजस्तै भयो ।
नेपाली वास्तुकला र ग्रामीण समाजबारे जान्न खोज्ने जो-कोहीका लागि पनि यो पुस्तक अति उपयोगी छ । देश चिन्तन गरेर अरुलाई पनि देखाउन, चिनाउन, बुझाउन सक्ने लेखकको शक्तिबाट म मोहित भएको छु र लेखककै शैलीमा भन्न चाहन्छु, “देशदृष्टिमार्फत देशलाई आफूले देखेर, बुझेर, चिनेर र लेखेर सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई पनि देखाई, बुझाई, चिनाई आफ्नोपनको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न चेतना जगाउने 'देशदृष्टि' पुस्तकका लेखक मिलन बगालेज्यूको जय होस् ।”
(लेखक थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा चौथो वर्षमा आर्किटेक्चर अध्ययनरत छन् ।)
लेखक: मिलन बगाले
प्रकाशक: साङ्ग्रिला पुस्तक
मूल्य: रु. ३००/-